यी चार राशि भएका व्यक्तिसँग हुन्छ संसारकै अद्भुत शक्ति – Enepali News
कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषीको माध्यमबाट मिल्न सक्छ । जीवनको गोप्य कुराको खुलासा पनि तपाईको कुन्डलीले गर्छ ।तर यी सबैको इतर ज्यातिषी विद्याको एक अर्को खास विशेषता छ । जसअन्तर्गत तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुवी स्वतः उसभित्र प्रेवश गर्छ ।
Prevआज ऋषि पञ्चमी, नेपाली नारीहरुले अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदै
Nextबिहानै आयो दुखद खबर कोरोना बाट अध्यक्षको ज्यान गयो ……